एनआइसी एशिया बैंकको ‘क्यूआर रिफर एण्ड अर्न’ योजना : यसरी कमाउन सकिन्छ नगद ! – Namaste Dainik
August 26, 2020 NamastedainikLeaveaComment on एनआइसी एशिया बैंकको ‘क्यूआर रिफर एण्ड अर्न’ योजना : यसरी कमाउन सकिन्छ नगद !
काठमाडौं । एनआइसी एशिया बैंकले समयअनुरुप विभिन्न योजनाहरू ल्याउने क्रममा नयाँ क्यूआर मर्चेन्ट रिफर गर्दा नगद पुरस्कार दिने ‘क्यूआर रिफर एण्ड अर्न’ योजना ल्याएको छ । यस बैंकका क्यूआर मर्चेन्ट तथा ग्राहकहरूले भदौ र असोज महिनाभर उक्त योजनामा सहभागी जनाउन सक्नेछन् ।